Akụkọ - Igodo ụgbọ ala nwere ọrụ anọ zoro ezo, nwere ike ịchekwa ndụ na oge mberede
Igodo Car nwere ọrụ zoro ezo anọ, nwere ike ịchekwa ndụ na oge mberede
Naanị open the ụzọ tagzi
Imirikiti ụgbọ ala nwere ike mepee windo tagzi mgbe ịpị igodo dịpụrụ adịpụ, naanị mgbe ịpịrị ya ugboro abụọ, enwere ike imeghe ọnụ ụzọ niile.
Driversfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala na-eburu ụgbọ ala na ebe a na-adọba ụgbọala, ọ bụrụ na ha mepee ụzọ ụgbọ ala, ha nwere ike igbochi ndị ọjọọ ịbanye n'ụgbọ ala ahụ site n'oche azụ nke ụgbọala ma ọ bụ n'ọnụ ụzọ oche ndị njem. Yabụ, ọrụ nchekwa ndụ a dị oke ọnụ ahịa, ọ bụghị ya, ọkachasị maka ndị ọkwọ ụgbọ ala?
Gbanyụọ windo ụgbọ ala ahụ
Mgbe ụgbọ ala ahụ kwụchara, gbanyụọ njin ahụ ozugbo, dọpụta breeki aka ka ọ pụọ n'ụgbọala pụọ. Ma na mberede na-ele anya n'azụ, hụrụ echefu imechi windo ma ọ bụ mkpuchi anyanwụ. Kedu ihe ị ga-eme n'oge a? Ọ ga-alaghachi n'ụgbọala, gbanye ọkụ mgbanye, mechie windo na mkpuchi anwụ, wee mechie ụgbọ ala ahụ ọzọ. Ọ na-eweta nsogbu?
N'ezie, ọtụtụ ndị mmadụ amaghị, mgbe ụgbọ ala gbanyụsịrị, ọ bụrụhaala na ị pịa ma jide bọtịnụ mkpọchi nke igodo njikwa, iko na anwụ nke ụgbọ ala ga-emechi ozugbo! Na ụfọdụ ụgbọ ala, ọ bụrụhaala na ejiri ọrụ mkpọchi njikwa, windo niile ga-ebili ma mechie. Ọrụ a dị oke mkpa, ọ bụ ozioma nke Mata, haha.
Chọta ihe ụgbọ ala ngwa ngwa
Ọ bụrụ n’ịchọtaghị ụgbọ ala gị ọsọ ọsọ, igodo ụgbọ ala nwere bọtịnụ nwere ike inyere gị aka. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-aga ahịa ma na-adọba ụgbọala gị n'okporo ala na-adọba ụgbọala, ịkwesịrị ịchọ ụwa niile mgbe ị laghachiri iburu ya. Amala jijiji n’oge a. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ụgbọ ala gị, naanị ịkwesịrị ịpị bọtịnụ uhie na igodo ụgbọ ala iji mee ka ụgbọ ala ahụ nwee ụda. Nke a ga - eme ka ọ dịrị gị mfe ịchọta ụgbọ ala gị, mana kpachara anya, Ejikwala ọrụ a n'ihe gbasara oge ịpụta, ebe ọ ga - emetụta ndị ọzọ mgbe ị jiri ya.
Ọtụtụ ụdị njikwa akara ntanetị nwere bọtịnụ iji nyere gị aka mepee akpati ahụ na-akpaghị aka. Long pịa ogwe kpọghee bọtịnụ (na ụfọdụ ụgbọala, abụọ-pịa), akpati ga-emeghe na-akpaghị aka. Ọ bụrụ n ’ị si nnukwu ụlọ ahịa pụta ma buru nnukwu akpa n’aka gị, ọ ga-aba uru n’oge a, ọ ga - ewetakwa otu ihe ga - eme ka ọ dịrị gị mma.
Post oge: Ọgọstụ-17-2020